Kubatana - Archive - Is China funding Zimbabwe-s referendum and elections - Clifford Chitupa Mashiri - Feb 24, 2013
Is China funding Zimbabwe-s referendum and elections
All of a sudden Zimbabwe-s cash-strapped coalition government has funds for polls despite making an appeal for help from the United Nations to foot its US$250m election bill only a fortnight ago.
But in a major climb down Zanu-PF-s Justice Minister Patrick Chinamasa had co-written a letter with MDC-T-s Finance Minister Tendai Biti to the UNDP asking for funds for the elections whose date still remains a mystery.
Just before putting down their glasses of champagne of celebrating that the UNDP had "approved" Zimbabwe-s request for election money, another breaking news came "Zimbabwe fails to secure external funding for referendum" (SWRadioAfrica.com, 22/02/13).
Curiously, the same natural resources Mugabe was referring to (presumably diamonds, platinum, elephants and rhinos) have not been used transparently to fund education, Zimbabwe-s employment creation efforts or health for all, but have arguably been given to China for a song.
Given that Zimbabwean companies are operating at 50% capacity or lower and cannot easily part with US$200 million required, as seen from the unsuccessful rent seeking for Mugabe-s 21st Feb Movement which secured donations from only two local businesses, Bhadhela and Jays wholesalers , so where has Zimbabwe secured funds for the controversial referendum and elections?
At a time when Zimbabwe Republic Police is criminalising the ownership of wind-up short wave radio sets, the Chinese delegation handed over an outside broadcasting van and the uplink obviously to boost Zanu-PF propaganda while denying
As if to reassure her Chinese guest, the Acting President Joyce Mujuru reportedly declared that Western observers are not welcome to monitor Zimbabwe-s harmonised elections. This is a bit strange considering the fact that they have not yet secured the necessary funds for elections.
Or, is this Zanu-PF-s way of telling the European Union, to stay away from the 2013 elections, despite easing targeted sanctions on 21 Mugabe loyalists supposedly to reward him, in the hope of sharing the economic cake at the expense of human rights given the crackdown on NGOs in Zimbabwe?
While the source of poll funds may be puzzling, it may not be as curious as the MDC-T-s endorsement of the unrealistic referendum date of 16 March given the poor logistics in the country.
Equally incomprehensible is Morgan Tsvangirai-s approval of what some in both MDC formations view as Zanu-pf sympathisers to head the Human Rights Commission and the Zimbabwe Electoral Commission ahead of the mother of all controversial elections.
Is China funding Zimbabwe-s referendum and elections?